トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Horukon Works
Raha tsy fantatrao tsara, nisy efi-trano eto amin'ity pachinko Horukon hoe, dia toa ny olona sasany dia nihevitra ho tsy ara-dal?na, toy ny lavitra, tany am-boalohany dia tsy dia milina fa ny zavatra toy izany. Ny Horukon, dia ny fanafohezana ny Hol solosaina. Raha niresaka ny
izay tokony hatao milina ny, misy tanjona roa mizara ho teny mafy. Ary azo avy ninonoanao niakatra teny aggregating ny latabatry ny tahirin-kevitra, toy ny varotra sy ny tombony lehibe sy implantation, dia hiakatra fanaraha-maso ny hosoka. Raha fintinina, ny Horukon, no ho ny zava-misy fa ny milina izay mitantana ny angon-drakitra. Voalohany indrindra, dia ny angon-drakitra, ny milina satria nitsetsitra ny angon-drakitra mba Horukon no nametraka sehatra iray monja. Misintona ny wiring avy
mitsangana, dia rafitra izay avy ny tahirin-kevitra izay ho mifandray amin'ny milina. Avia tahirin-kevitra dia ny hoe niakatra, ny sy ny varotra ary ny aizim-tombony isaky ny latabatra, ny isan'ny fiara ho azy, ny akora ilaina amin'ny raharaham-barotra, toy ny baolina tarika vidin'ny varotra hafa, Horukon dia rehefa nahazo ny tsato-kazo famantarana niala teo amin'ny latabatra, dia ho ninonoanao ao real-time .
tsirairay avy ny tahirin-kevitra, tahirin-kevitra na tahirin-kevitra manokana sy ny modely ao amin'ny nosy vondrona, dia efa tonga tahaka ny hita fivarotana ny tahirin-kevitra rehetra.
satria ny antontan-kevitra avy ho amin'ny tena-andro, fahoriana, toy ny rehefa misy ihany koa ny tsy fahampian'ny wiring dia lasa azo atao ny mahita avy hatrany. Varotra toy izany tahirin-kevitra, eo amin'ny lafiny tena manao ny raharaham-barotra, ianao dia tena ilaina angona.
ity mifototra amin'ny isa, mihevitra aho fa ny raharaha ny toy ireto manaraka ireto fantsika andro fanitsiana sy ny toe-javatra. Ao amin'ny orinasa hafa, mihevitra aho fa raha tsy misy ny angon-drakitra fivarotana manaraka ny raharaham-barotra drafitra andro dia tsy natsangana, nefa miara amin'ny pachinko trano izy. Rehefa
tsy misy angon-drakitra, raharaham-barotra dia tsy ho afaka mihitsy. Rehefa hanao
eny an-dalambe, na dia afaka hifehy ny isan-in Horukon, dia manasongadina tahaka antsika maimaim-poana-maso, raha Uchikome varotra tanjona dia tsy ahitana ireo fitaovana amin'ny.
※ Na izany aza, Koa mihainoa lahateny ny pachinko parlors matetika ihany koa ny mampiasa Horukon izay fitaovana toy izany asany. Izany dia handeha hisambotra ho ny tombony azo amin'ny zava-misy ny fomba nahasamborana Horukon.